(trg)="1.2"> လာ ​ ပတ်( ဇ်) တွင်ရေ ​ ဒီ ​ ယို ​ သတ္တိ ​ ကြွ ယူ ​ ရေ ​ နီ ​ ယမ်​ များ ဖမ်းဆီး ​ ရမိ
(trg)="3.2"> ထို့ကြောင့် ၎ င်းဓာတ်သတ္တုများသည်ရေဒီယိုသတ္တြွိကပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်း သံသယမှာ မရှင်းလင်းခဲ့ပေ ။
(trg)="4.1"> ရဲများက ဩဂုတ်လ ( ၂၈ ) ရက်နေ့တွင်လာပတ်( ဇ်) ၊
(trg)="1.2"> ဆယ့် ငါးနှစ်အရွယ်ရှိ ဇမ်ဘီးယားအနွယ်၊
(trg)="4.1"> ဆမ်ကင်​ ဘီ ​ ညီ ​ ၏ ဓာတ်​ ပုံ ၊
(trg)="4.2"> ၄င်း ​ ၏ တွစ်​ တာ ​ မှ ယူထားသည ်
(trg)="5.1"> ကမ္ဘာ့အသံက ဆမ်နှင့် အီးမေး ( လ်) မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ၄င်း ၏ အောင်မြင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="7.1"> ၂၀၁၄ မေ ၂၆ရက်နေ့မှာတော့ဝင်းဒိုးဖုန်းစတိုးမှာ ကျွန်တော့် ရဲ့ပထမဆုံး ပရိုဂရမ်ငယ်ဖြစ်တဲ့လိုက်ကို တင်ခဲ့တယ်။
(trg)="7.2"> ကြော်ငြာမပါဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိမယ့် ဓာတ်မီးပရိုဂရမ်ကို လိုက်ရှာရင်းနဲ့အကြံရခဲ့တာလေ ။
(trg)="7.3"> ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ခုမှရှာမတွေ့တဲ့အခါကျ ကိုယ့် ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
(trg)="7.4"> ရှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ရတ်ဒစ်ဝင်းဒိုးဖုန်း အသိုင်းအဝန်းက ဝေဖန်မှုတွေရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါင်းလုပ်ချတာ အကြိမ်( ၃၀၀ ) ရှိခဲ့ပြီး ကြယ်ငါးလုံးပေးတာ တစ်ကြိမ်ရခဲ့တယ်။
(trg)="7.9"> ဒါပေမဲ့ပရိုဂရမ်ရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လုပ်ပေးတယ်၊
(trg)="7.10"> ပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်က ဘယ်လောက်ကျယ်ပြောလဲဆိုတာလည်း သိလိုက်ရတယ်။
(trg)="7.12"> အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ငယ်တစ်ခုကို ရေးနိုင်ခဲ့တယ်။
(trg)="8.4"> com / 8JRfgXNynL — မိုက်ခရိုဆော့( ဖ်) ပညာရေး ( @ microsofteduk ) ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၊
(trg)="8.1"> ထိုကဲ့သို့သော ပူပေါင်းရိုက်ကူးသော ဗီဒီယို တစ်ခုကို ဟာဗီ ဘေး ( Hervey Bay ) ဒေသရှိ ကော်ရာ၀င်ဂါ ကနဦးတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့( Korrawinga Aboriginal Corporation ) မှ ဒေသခံ ဘာသာဗေဒပညာရှင်ဂျိုက်( စ်) ဘွန်နာ ( Joyce Bonner ) နှင့် ABC Open မှ ထုတ်လုပ်သူ ဘရက်မာဆေလို ( စ်) ( Brad Marsellos ) တို့နှစ်ဦးသည်အတူတူ ပြလုပ်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="3.3"> ထိုလူငယ်မျာသည်တက္ကသိုလ်ဘာသာရပ်အသီးသီးကို လေ့လာရန်ဖနွမ်းပင်သို့ရောက်ရှိလာကြပြီး ဤအခွင့် အလမ်းကို လက်လှမ်းမှီ ရယူနိုင်ခဲ့ကာ ၄င်းတို့နှင့် အတွေ့အကြုံတူ ၊
(trg)="3.4"> နောက်ခံသမိုင်းတူသော အခြားသူတို့နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
(trg)="8.1"> ကျေးလက်နေ ကမ္ဘောဒီးယားအများစုအဖို့အလုပ်အကိုင်အတည်တကျ ရရှိရန်အလို့ငှါ နိုင်ငံအနှံ့အပြားသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်လိုအပ်သော အခြေနေကိုကြုံတွေ့နေရသည်။
(trg)="8.2"> သို့သော်၄င်းတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသော ကြမ်းတမ်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို ပြင်ပမှ လူတို့သတိမထားမိကြပေ ၊
(trg)="8.3"> အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်ငန်းများတွင်စီးပွားကူးသန်းရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ ခန့် မှန်းချက်အရ အလုပ်သမား ၉၀ % မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး အလုပ်သမစုစုပေါင်း ( ၃ ) သိန်းနီးပါးခန့် ရှိသည်။
(src)="6.12"> Ukampirus ukax akan janiw yäqatakiti
(trg)="8.23"> သူနာပြုတွေက ကျွန်မတို့အလုပ်သမားတွေကိုပဲ အမြဲ အပြစ်တင်နေတယ်။
(trg)="8.29"> ကျောင်းနေအရွယ်သားသမီးများကို ကျောင်းဆက်ထားနိုင်ရန်ကျေးလက်နေမိသားစုများ ရုန်းကန်နေရသည ်
(trg)="9.2"> ကျေးလက်ဒေသခံများအနေဖြင့် လူငယ်များကို အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင်အကူအညီ ပေးစေလိုကြသည့် အတွက်စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။
(trg)="9.3"> ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် လည်း မိဘအများအပြားအနေဖြင့် သားသမီးများကို ကျောင်းဆက်ထားရန်၊
(trg)="10.6"> ဆရာတွေကလည်း ၄င်းတို့ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သင်ပေးသည်။
(src)="11.3"> Tonlé Sap ukat Mekong jupanakax markatakix askipxiwa .
(trg)="10.7"> နားလည်မှုနှင့် ဆက်သင်ပေးသည့် သဘောမျိုးဖြစ်သည်။
(trg)="10.8"> ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရသည့် ကလေးများကို အိမ်ပြန်မလွှတ်ရက်ဟု ဆရာများက ပြောသည်။
(trg)="10.9"> ဆက်လက်၍ ဆရာများမှ ၄င်းတို့အနေဖြင့် ကျောင်းသားမိဘများ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သည်အထိ စောင့် ရုံမှတစ်ပါး အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသကဲ့သို့တစ်ချို့မိဘများ နှစ်လ ၊
(src)="11.8"> Apochhceng ukhamatwa , nayax aka campaña markar q ’ umachaña ukanw chikancht ’ asiwayta .
(trg)="11.1"> ဖနွမ်းပင်တွင်မြစ်အနီးတစ်ဝိုက်သန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်နေကြစဉ်ဓါတ်ပုံ- ချန်း စရေမန ်
(src)="11.9"> Nayax siristwa , taqiniw q ’ uman jakañarux yanapt ’ añasaspa , ukhamat markas markachirinakas askin uñt ’ ayasipxañapataki .
(trg)="12.3"> ကံဆိုးသည်မှာ ထိုမြစ်များသည်စွန့် ပစ်အညစ်အကြေးများကြောင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် သို့ရောက်နေသည်။
(src)="11.11"> CCDH uksan Directora Ejecutiva irpxarurix Sopheap Chak , mä microfinanciación colectiva thaqhaski jutïr luräwinkar yanapt ’ añataki .
(trg)="12.9"> ကျွန်ုပ်အာပိုချန်း သည်မြို့အားသန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ၀င်ခဲ့သော နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။
(trg)="12.13"> ခမာ ဘာသာစကားမှ အင်္ ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုပေးခဲ့သော ရာမနာဆွန်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။